Beesha Caalamka oo warqad dhaliil iyo goodis ah u soo dirtay madaxda ugu saraysa DKMG ah “Xog muhiim ah”. | Halganka Online
Beesha Caalamka oo warqad dhaliil iyo goodis ah u soo dirtay madaxda ugu saraysa DKMG ah “Xog muhiim ah”.
Beesha caalamka ayaa dhaaliil culus iyo caga juglayn ah usoo jeedisay madaxda ugu saraysa DKMG oo sanad ka hor ay Beesha caalamku ku soo dhistay magaalada Jabuuti oo uu xiligaasi shir ka socday.
Xog muhiim ah oo ay SomaliMeMo ka heshay Villa Somalia ayaa xaqiijinaysa in Shariif Sheekh Axmed Gacanta laga geliyay warqad dhaliil ah oo uga timid safiirada Beesha caalamka ee Nairobi ku sugan.
Sarkaal diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sarkaal kale oo Islaamiyiinta ka tirsan u sheegay in Shariif Sheekh Axmed loo keenay warqad dhaliil ah oo ay dowladiisa u soo jeediyeen caalamka waxaana laga codsaday Shariifka in uu isbedel sameeyo hadii kale caalamku ay xilka ka qaadi doonaan.
Saraalkan ka tirsan Villa Somalia wuxuu carrabka ku dhiftay in Shariifka uu joojiyay dhamaanba qorshe balaaran oo ay Beesha caalamku ku doonayeen in dowladiisu dagaallo ka riddo magaalada Muqdisho si islaamiyiinta loo kala daadiyo.
Shariifka ayaa ka soo horjeestay qaadida dagaal aan la ogayn natiijadiisa wuxuuna si gaar ah uga caga jiidayaa in uu dagaal geliyo ciidan aan mushaar lasiin taas oo keeni karta in marka uu dagaalku bilawdo ay askar badan hubka kala goosan karaan dowladda waxaana taagan dhaqaale xumo baahsan oo wasaaradaha dowlada ka dhax jirta.
Warqadan oo la sheegay in ay si wada jir ah u soo qoreen Q.Midoobe,Mareykanka iyo Deeq bixiyaasha kuwa isku sheegay waxaa looga codsaday Shariifka iyo Cumar Cabdi Rashiid in midkood uu xilka baneeyo si isbedel loo sameeyo.
SomaliMeMo oo xog waraysi layeelatay sarkaal islaami ah oo lahadlay sarkaal kale oo Villa Somalia ka tirsan ayaa ogaatay in Xilalka RW iyo madaxweynaha midkood lasiin doono siyaasiyiin dibad joog ah oo Qabuura Galeenka metelaya.
Wadamada Reer Galbeedka ayaa u muuqda in ay ka bogteen hadaladii iyo ficiladii uu ku dhaqaaqay Shariifka balse waxay caalamku ka qoomamaynayaan lacago badan oo ay ku bixiyeen ladagaalanka Islaamiyiinta oo ay ku khasaareen.
Shariif Sheekh Axmed ayaa Odayaasha Beesha uu ka soo jeedo uga dayriyey xaalka dowladiisa isagoona dadkaasi u sheegay in dhaliilo isdaba joog ah ay uga imaanayaan beesha caalamka.
Socdaalka uu Cumar Cabdi Rashiid ku aaday Kenya ayaa la sheegay in ay tahay Jawaab celin uu shariifka u diray Safaarada Mareykanka iyo beesha caalamka oo uu uga jawaabay eedayntii loo jeediyay.
« Golaha dhaqanka Beelaha Hawiye oo soo dhaweeyay Hubka ay Beelaha Soomaaliyeed ku Wareejinayaan Xoogaga Mujaahidiinta Al Shabaab. Ma U Dabaal Dagnaa Mawlidka Mise‏!! »